Voaantso hiaiky heloka ireo mpilalao ody ratsy sy mpamosavy - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Sahala amin’ny antso miantefa amin’ny olon-drehetra dia voaantso hivalo sy hibaboka eo anatrehan’Andriamanitra ireo mpilalao ody mahery sy mpamosavy rehetra. Tsy vitsy amin’izy ireny no nandao ny asa ratsiny, noho ny zavatra nahazo azy na ny sedra nanjo ny tenany teo amin’ny fiainany, ka nahatonga azy nandini-tena sy niaiky heloka ary nibaboka tanteraka.
Maro tamin’ireo milalao ody ratsy, araka ny tantara no nandao ny asa ratsiny, ary nanenina tokoa noho ny tsy rariny nataony, fa be no nampijaly na namono olona tsy manan-tsiny. Ratsy ny filalaovana ody mahery ary loza mitatao ho an’ny taranaka ny famosaviana. Tsy mba soa ho an’ny fiaraha-monina ny fisian’ny famosaviana sy filalaovana ody ratsy, fa loza mihantona sy mitatao ho an’ny olon-drehetra izany. Koa rariny raha ho sazina sy hasaina mifona, mivalo, ireo rehetra tratra manao izany. Hitsiny koa raha ho fongorana ny fomba fisainan’ny olona toa izany.
Fanompoa-tsampy ny fitanana ody mahery
Misy ary mbola maro ny olona izay mitoky amin’ny herin’ny ody sy ny sampy tompoiny na ianteherany. Hadinony tanteraka Andriamanitra, ka ny herin’ireo kalanoro sy vazimba ary ny zavaboary hafa, mbamin’ny fitandremana ny fadifady rehetra momba izany no arahiny sy lalainy. Ao koa ireo mihambo ho mitana hazarin-karena ka diso miantehitra amin’ny vola amam-pananana maro, zary tsy miraharaha an’Andriamanitra sy ny hafa intsony. Ireny rehetra ireny dia fitokisana vato aman-kazo avokoa, ka mahatonga ny olona hiantehitra amin’ny herin’ny maizina sy ny filan’izao tontolo izao. Ao ny toa lasa manadinodino ilay hany Mpahary tokana nanao ny zava-drehetra.
Fanompoan-tsampy tsotra izao no azo ilazana ny ataon’ireo olona miantehitra amin’ny herin’ny maizina sy ny harena ary ny voninahitra amam-pahefana ara-nofo. Fanandevozana ny hafa no aterak’ireny, ary mamita-tena izay miankim-po aminy satria, mandalo sy mihelina avokoa izao rehetra izao, izao tontolo izao sy ny filany. Voalaza fa ny fakana ody fitia no mahatonga ny olona hamosavy, kanefa dia tsy misy fitiavana azo vidina sy fandrihina ary atakalo vola aman-karena. Fanomezan’Andriamanitra ny tena fitiavana, ka ny ivelan’izany dia fitaka sy haitraitra ary rendrarendra avokoa.
Asan’ny Ratsy ny mosavy sy vorika ary ny lainga ifaharany
Tsy misy matoky mpamosavy velively; ary raha misy olona tratra manao izany dia feno fahafaham-baraka tokoa. Fa loza koa no afitsoky ny mpamorika, satria miafina sady tsy fantatra izy, ary sahy manapoizina ny hafa amin’ny andro antoandro, tena mpamitaka tokoa. Lainga no ifaharan’ny vorika, satria olona toa mba itokisana ihany no manao izany, nefa noho ny fitiavam-bola na noho ny fialonana, dia mahavanon-doza, mandatsak’ain’olona mangingina.
An’Andriamanitra irery ihany ny fandresena
Efa nandresy an’izao tontolo izao i Kristy. Koa na ny amperora Konstantino na i Klovisy mpanjaka dia samy nahatsapa fa nitondra fandresena ho azy ny fandraisana ny Lakroa ho fiaro sy famantarana tamin’ny ady nataony avy. Nialan’izy ireo ny fomba mahadiso ary nidirany sy nizorany kosa ny lalan-tsara, dia ny fandraisana ny Batemy sy ny fiarovana ireo Kristianina tao amin’ny faritaniny avy. Ekena fa be ny zava-manahirana, saingy tsy fanao ny mandatsaka aina, tsy fomba ny milalao ody ratsy, tsy mahasoa ny mamorika sy mamosavy… Koa mila beazina ny taranaka mba ho tia vavaka sy hahay manetry tena.
Tsy maintsy hamafisina araka izany ireo dina sy rafitra ifampifehezan’ny mpiara-belona, mba tsy hisy ny fiangarana sy fanaovana an-kilabao ny hafa. Mitaky fibebahana sy fifanajana ary fifampihainoana anefa izany rehetra izany. Izay no antony anasana ireo mpilalao ody mahery sy mpamosavy ary mpamorika mba hibaboka sy hiaiky heloka mangingina.
Maro ny resaka mandeha momba ny mosavy, vorika, vonoana olona ary ny halatr’omby, mbamin’ny herisetra isan-karazany. Ny fantatra dia be amin’ireo malaso no tsikaritry ny olona fa miravaka ody mahatsiravina sy tapa-kazo... Mitady hanjaka sy hiely indray ny fanompoan-tsampy, satria be no very toky sy very fanahy mbola velona, tahaka ny valala voatango. Izany no antony anairana antsika mianakavy mba hiezaka hanabe ny taranaka tsy hinohino befahatany, na hanao ny tenany ho mahavita azy, ka zary tsy miraharaha ny hafa sy manodidina, manao mamy fo velona, manadino an’Andriamanitra. Nefa ny zava-drehetra dia fanomezan’Andriamanitra, ary ny asa ratsy isan-karazany kosa dia avy amin’ilay Ratsy sy i Satana, fahavalon’ny olombelona sy ny tena fivoarana.
Koa alao hery àry, satria ny fifikirana amin’ny Tompo irery no hany lalana tokana azo antoka, hitondra antsika ho any amin’ny tena fiadanana sy fandriam-pahalemana ary ny fandrosoana tena izy. Ny ivelan’izany dia rediredy sy lainga ary fitaka avokoa.